Tag: horonan-tsary mahatsikaiky | Martech Zone
Tag: horonan-tsary mampihomehy
Inona no hataon'ny dokambarotra zanatany misavoritaka
Alarobia 6, 2014 Alakamisy, Aogositra 11, 2016 Douglas Karr
Tsy azoko antoka raha mbola nahita an'ity horonantsary ity ianao. Tsy azo antoka ho an'ny asa izany fa mampihomehy tokoa momba ny lohahevitry ny gazety lehibe sy ny famoahana vaovao nentim-paharazana mitady hampitombo ny vola miditra amin'ny alàlan'ny fampiratiana ny dokam-barotra zanatany, fantatra ihany koa amin'ny hoe atiny tohanan'ny. Inona ny atao hoe Advertising Native? Ny dokam-barotra zanatany dia fomba fanaovana dokambarotra an-tserasera izay ezahan'ny mpanao doka hahasarika ny saina amin'ny fanomezana atiny mifanaraka amin'ny zavatra niainan'ny mpampiasa. Fandaharana doka zanatany
Lahatsary: ​​Ahoana no fiasan'ny haino aman-jery sosialy
Alahady, Aogositra 16, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Manomboka amin'ny iray izany rehetra izany… avy eo tsy azo sakanana.
Sunday, August 16, 2009 Sunday, April 24, 2016
Fifandraisan'ny mpanjifa mpivarotra amin'ny tena fiainana
Zoma, Jona 12, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Ny tantaran'ny mpanjifako tiako indrindra dia ny filazan'ny mpanjifa ahy fa ny salan'ora isan'ora dia in-droa izay ny mpifaninana akaiky ahy indrindra. Nolazaiko azy fa faly aho mahafeno io taha io fa maharitra roa heny ny asa. Niato vetivety izy rehefa nilentika tao… Tsy irinao ve ny hitondra ireo teknika manahirana anao ireo hiaraka aminao amin'ny tena fiainana? Toy izao no mety ho fisehony!
Lahatsary: ​​Twitter amin'ny tena fiainana
Alakamisy, Aprily 30, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Mety ity no ohatra lehibe indrindra amin'ny hadalan'ny Twitter. Heveriko fa manaraka olona 5,000 aho satria iray isaky ny sioka 1,000 no ilaina. Jereo ny horonantsary dia ho hitanao ny zavatra hitako. Na dia miaraka amin'ny hadalana rehetra aza dia mbola tiako ihany ny Twitter! Tao no nahitako an'ity horonantsary ity, mazava ho azy!
Friday, May 18, 2007 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Ahoana raha niaraka tamin'ny olona toa azy ireo izahay nitahiry azy ireo? Mety handeha toa zavatra toy izao… Toro tendro mankany Mack ao amin'ny bilaogy The Viral Garden.